(လေ သူ ရဲ လ က် နှိ ပ် စ က် နှင့် မြ သ န်းတ င့်် )
တနေ့ ကိုတင်မြက အမျိုးသားတယောက်ခေါ်လာ၊ ပါလာသော အထုပ်များအတွက် ကျန်နော်က ပန်းကန်ယူလာပေးစဉ် သူ့ ဆီမှာဘာစားစရာမှမရှိလို့ အိမ်ကြွက်တွေတောင် တခြားသွားရှာစားရတာဟု ကိုတင်မြကပြော၏။ အမြည်းများ အငမ်းမရ ယူစားနေသည်ကိုကြည့်ပြီး မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည်က Say thank you. You are very rude. စာရေးဆရာချင်း Thank you လေးတောင်မပြောဘူးလားဟုပြောရာ ... ဒေါသထွက်ရမည်ထက် အံ့သြစွာ မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည်အား ငေးကြည့်နေမိ၏။
ကိုတင်မြက ခပ်အေးအေး ... စာရေးဆရာ လေသူရဲ (တဦး) ဟု မိတ်ဆက်ပေးသည်။
သူလည်းးတေးဂီတကြိုက်သမို့ ဝတ္ထုတိုရေးသမား ၃ ယောက် စကားပြောလို့ကောင်း၊ သီချင်းရွေးကြ နားထောင်ကြ၊ အချိန် တွေ ကုန်မှန်းမသိကြနှင့် အပြန်တွင် လေသူရဲ (တဦး) လည်း Thank you ပြောဖို့ သတိမရ။ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားလိုက်ကြ .... နှစ်ပေါင်းများစွာကြတော့ Thank you လည်း ဘယ်ပျောက်သွားသည်မသိ။
Japan Radio NHK မှာသွားလုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရပြီးမှ ထန်းပင်လိုမြင့်သူအတွက် ကျနော်ဖယ်ပေးရ၍ တိုက်ခန်းရောင်းကာ အကိုကြီး ဦးကြည်လွင်နှင့် သွားနေ၏။ ပဲခူးမှာ သူမယ်ဒလင်တီးရင် ဘေးကနားထောင်၊ သူဘောလုံးကန်ရာ လိုက်ကြည့်သူ ကျနော့်အား ညီငယ်အရင်းလိုချစ်သူ... ချင်းပြည်နယ် ဒုတိယအတွင်းဝန်ကနေ ရာထူးတက် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဖိုးစိန်လမ်း၌ နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတွင် မိသားစုနှင့် နေနေသည်။
မင်းက စာရေးဆရာဆိုတော့ ဒီလက်နှိပ်စက်လေး အသုံးဝင်လိမ့်မယ် ... ဟု တနေ့ ရုံးကအပြန်တွင် Olympia Portable Tyewriter ကျနော့်အား လက်ဆောင်ပေးသည်။ သားရေးအိတ်နှင့် လက်ဆွဲပေါ့ပေါ့ပါး။
ကျနော်ပုသိမ်လမ်း၌နေစဉ်တုန်းက တခါတလေ သူ့သား အပါကိုပါခေါ်လာကာ ရေဒီယိုဂရမ်ကြီးနှင့် သီချင်းလာ နားထောင် လေ့ရှိသော စာရေးဆရာ လေသူရဲ (တဦး) သည် ဘိုကလေးကျောင်းလမ်းသို့ ပြောင်းသွားသည့်တိုင် စုံစမ်းကာရောက်လာ တတ်၏။ အခြေအနေကားပြောင်းလဲနေပြီ၊ ၅၂ လမ်းတုန်းကနှင့် မတူ ... နည်းနည်းလေးမှမတူတော့။ ယခုအခါ အိမ်သာကို ပင် အိမ်ရှင်နှင့် တွဲသုံးရသည့်ဘဝ။
မြသန်းတင့် အိမ်မှာရှိနေ၍ သုံးယောက်သား စကားကောင်းနေကြချိန် ....
သို့သော်လည်း မဆလ ခေတ်တွင်မူ ... ဘားလမ်းက လက်နှိပ်စက်ရိုက်နေသူများပင် မထင်တော့သော သို့မဟုတ် ပျောက် နေသော စာလုံးကိုလက်ရေးနှင့် ဖြည့်နေရသောအချိန်ပါ။ မြန်မာတပြည်လုံးတွင် လက်ချိုး၍ ရေတွက်ရလောက်အောင် နည်းပါးသော Olympia Portable Tyewriter ၏ ကာလပေါက်ဈေးကို ခန့်မှန်းမရ။ အတန်ကြာချိန်ဆနေပြီးမှ ... မြသန်း တင့်က ကျနော် .. ကျနော် အမြတ် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဗျာဟုမေး၏။
မြသန်းတင့်စာအုပ်တွေ ထွက်ရေးအတွက် ကျနော်ဘယ်လိုလုပ် အမြတ်ယူရမှာလဲ ... ဟူ၍ လေသူရဲ (တဦး) က ဖြေလိုက် သည်။
လေသူရဲ (တဦး) ပြောနေကျ စာရေးဆရာချင်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖို့မလိုဆိုသည်ထက် ကျနော်ဘယ်လိုလုပ် အမြတ်ယူ ရမှာလဲ ... ဟူသော အသံလေးသာ ကျနော့်ရင်ထဲပဲ့တင်သံထပ်နေသည်ဟု တွေးမိကြောင်းပါ။